🐶Letha isilwane sakho, 🎯 udlale imidlalo, futhi 👙uzipholele kubhavu oshisayo!
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Cabins For YOU
U-Cabins For YOU unokuphawula okungu-1966 kwezinye izindawo.
Uma Unenhlanhla Yanele ukuba ungene kule ndlu enamakamelo angu-2, enamagumbi okugezela angu-2 elungele izithuthuthu anendawo engu-8, uzolashelwa endaweni elungele izilwane ezifuywayo lapho ungathola khona umdlwane wakho ngaphansi kwezinyawo zakho njengoba uziphumulele. kuvulandi wezingodo, jabulela ukudla kwangaphandle etafuleni lepikiniki elisesitezini, zicwilise kubhavu oshisayo opholile onokubukwa okugcwele izihlahla, futhi udlale imidlalo kugumbi lokudlela eliyimfihlo nomndeni nabangane. I-Lucky Enough igqokelwe izingxenye ezilinganayo zokuzijabulisa nokuphumula, futhi inezinsiza eziningi ezizokwenza uzizwe usekhaya ukuze uhlale unethezekile futhi okahle. Ku-Lucky Enough, vumela ukucindezeleka kwakho kuhanjiswe nomoya opholile we-Great Smoky Mountains.
Izingane azikhathazekile ngesikole futhi umsebenzi uyinto ekude kakhulu nomqondo wakho ngenkathi uhlala endaweni ethokomele yendlu yakho yokulala engu-2 enezindawo ezivamile ezivulekile kanye nefenisha ethokomele ye-motif. Ngemva kosuku lwemidlalo nobumnandi e-Fannie Farkle's, The Island, nase-Dollywood, xhumanisa izingane futhi ulungele ukukhahlela izinyawo zakho phezulu phambi kwesikrini esikhulu se-TV kanye neziko noma uphuze ingilazi yokukhanya kwenyanga kwasendaweni ngaphambi kokulala.
Itholakala e-Bear Creek Crossing, i-Lucky Enough ikugcina useduze nobumnandi bedolobha ngenkathi ikunikeza ukuzwa komphakathi okunethezekile. Ngemidlalo, ukunethezeka kwekhaya, nomoya othokomele osezintabeni, kuyindlela enhle yokubaleka ngempelasonto yamantombazane, uhambo lobaba nendodana, indawo yabavakashi, noma impelasonto nomndeni. Ungakwazi ukuthokomala ekhabetheni ngemva kwezinsuku ezimatasatasa edolobheni noma uthathe uhambo olufanele uye e-Great Smoky Mountains National Park ngaphansi kwamamayela angu-15 futhi uhlole amahlathi ahlanzekile, angakathintwa.
I-Lucky Enough igqokelwe izingxenye ezilinganayo zokuzijabulisa nokuphumula, futhi inezinsiza eziningi ezizokwenza uzizwe usekhaya ukuze uhlale unethezekile futhi okahle. Ku-Lucky Enough, vumela ukucindezeleka kwakho kuhanjiswe nomoya opholile we-Great Smoky Mountains.
Izingane azikhathazekile ngesikole futhi umsebenzi uyinto ekude kakhulu nomqondo wakho ngenkathi uhlala endaweni ethokomele yendlu yakho yokulala engu-2 enezindawo ezivamile ezivulekile kanye nefenisha ethokomele ye-motif. Ngemva kosuku lwemidlalo nobumnandi e-Fannie Farkle, The Island, nase-Dollywood, xhumanisa izingane futhi ulungele ukukhahlela izinyawo zakho phezulu phambi kwesikrini esikhulu se-TV neziko noma uphuze ingilazi yokukhanya kwenyanga kwendawo ngaphambi kokuya umbhede.
Itholakala e-Bear Creek Crossing, i-Lucky Enough ikugcina useduze nobumnandi bedolobha ngenkathi ikunikeza ukuzwa komphakathi okunethezekile. Ngamageyimu, ukunethezeka kwekhaya, nomoya othokomele wentaba,’indlela enhle yokubalekela amantombazane’ ngempelasonto, uhambo lukababa nendodana, abaqwala izintaba’ ukuhlehla, noma impelasonto nomndeni. Ungakwazi ukuthokomala ekhabetheni ngemva kwezinsuku ezimatasatasa edolobheni noma uthathe uhambo olufanele uye e-Great Smoky Mountains National Park ngaphansi kwamamayela angu-15 futhi uhlole amahlathi ahlanzekile, angakathintwa.
I-Living RoomCozy up on the cushy suede couch kusihlwa for a cabin movie movie ku-flatscreen esikhulu esigcwele umsindo ozungezile. Vula iziko likagesi ukuze uzifudumeze ngezinsuku ezipholile ngaphandle kokuthenga izinkuni! Khipha izicathulo zakho bese uphakamisa izinyawo zakho ukuze uthole isihlwathi esiphumuzayo santambama ehlobo ngemva kosuku lwe-whitewater rafting nabangani emfuleni i-Pigeon River. Phakathi nesikhathi sokuphumula nezinsuku ezichithwe ekhabetheni, sebenzisa itafula lekhofi elibanzi ukuze uthole izindida, amakhadi, nemidlalo yebhodi nezingane phambi komlilo. Buka izinhlelo zakho ze-TV eziyintandokazi zasemini ekukhanyeni okuthambile ezihamba ngamawindi amade ubheke phezu kwevulandi, noma thatha incwadi bese uphumuza umoya.
I-KitchenFeel ekhaya njengoba upheqa ama-pancake ekuseni ekhishini elivulekile ngezinto zikagesi ezibushelelezi ezilinganiswe namathoni okhuni afudumele kanye nezimpawu zemvelo. Ngaphambi kokuba uphumele ngaphandle uye kuvulandi ukuze uphefumule umoya opholile wasekuseni wasentabeni, qala usuku lwakho ngenkomishi entsha yekhofi evutshelwe endaweni yokwenza ikhofi yasekhishini ukuze uqhamuke lapho uzinza esihlalweni sakho esinyakazayo.
Hlela ukudla komndeni wakho ukuze wonge imadlana futhi ugcine zonke igilosa edingekayo (okuhlanganisa ukudla okulula kwaphakathi kwamabili neziphuzo) esiqandisini esinosayizi ogcwele. Izitsha, izibuko, amabhodwe namapani…amathuluzi wonke alapha ukuze udale ukudla okumnandi okwenziwe ekhaya noma amasnacks asheshayo uma ufuna ukuzihlalela ekhabetheni. Uma ugibela imoto uya ekhaya usuka ohambweni lwakho uya e-Clingmans Dome, langazelela ukusebenzisa i-microwave ukushisisa kabusha lokho okusele okumnandi okuvela ku-Bennet’s Pit BBQ ukuze uthole ukukhululeka okusheshayo endlaleni yakho esetshenziwe.
I-Dining RoomHleka kanye nobudlelwane phezu kwezidlo ezibolile ezenziwe yikhabethe ekukhanyisweni okufudumele phezu kwendawo yokudlela ebukekayo esethiwe 4. Phakathi nesidlo sakusihlwa, galisa ithosi kubangani abahle etafuleni phakathi nempelasonto yentombazane yakho newayini elilethwe ekhaya lisuka ku-Rocky Top Wine Trail . Lungiselela usuku lwakho olude lwezindawo ezikhangayo zase-Gatlinburg ngesidlo sasekuseni se-pancake elangeni elithambile eliphuma efasiteleni lezwi. Uma isidlo sakusihlwa sesiphelile, sula etafuleni imidlalo yebhodi noma izingxoxo zasebusuku ngaphambi kokuyolala.
Amakamelo okulalaNgemva kwakusihlwa uhleka futhi udlala nezingane, zifake ngaphansi kwendwangu ethokomele yombhede wazo olingana nenkosi ngaphambi kokukhasa ngokuzumeka ngaphansi kwamakhava egunjini lakho. Vumela umoya omncane womlandeli ukuthi ulale phansi ngemva kokubuka i-TV yasebusuku kakhulu esikrinini esiyisicaba segumbi lakho. Thola isikhathi uwedwa ntambama futhi uqedele ukuthanda kwakho ukufunda manje ngokukhanya kwe-nightstand. Ungakwazi ukukhulula kalula amapotimende akho kanye nezinto ezintsha ezitholakalayo zokuthenga ku-dresser bese ucwilisa kubhavu wejethi kusihlwa ukuze uphumule ngaphambi kokushelela embhedeni ku-master suite.
I-Rec RoomUnesikhathi sokuphumula sekhabethe noma isimo sezulu sezulu esinemvula? Asikho isidingo sokwesaba isithukuthezi ku-Lucky Enough ngenxa yegumbi lomdlalo we-loft eligcwele ukuzijabulisa! Inselelo yezihambeli emiqhudelwaneni enobungani ku-air hockey, i-shuffleboard, i-pool, nemicibisholo. Fundisa ingane yakho ukuthi ingashutha kanjani amashothi akhohlisayo ku-pool table kuyilapho izingane ezincane zihleka futhi zidlala umdlalo we-air hockey. Ngenkathi izingane zidlala kumdlalo we-arcade, phenya umagazini ngaphansi kwesibani sokufunda ngenkathi uziphumulele esitulweni sokufunda. Thatha kancane isiphuzo sakho endaweni yokuhlala yesitayela sebha ngenkathi ulinde ithuba lakho lokuvula i-shuffleboard futhi ubukele igeyimu kusikrini esiyisicaba. Lesi sikhala sijabulisa wonke umuntu, sinendawo yokuphumula nokudlala.
Izinsiza Zangaphandle Vula igrisi bese usetha itafula lesidlo sasemini ngaphandle etafuleni lepikiniki ukuze uthole ukudla okumnandi emthunzini wovulandi ehlobo laseNtabeni Yomusi. Lapho ilanga lipholile lishona, dlala amakhadi etafuleni lepikiniki kuyilapho ama-hamburger nama-hot dogs kushise ku-grill eseduze. Emoyeni opholile ekuseni wasezintabeni, letha inkomishi yakho yetiye noma ikhofi ukuze uzinze kuvulandi ukuze uthole izikhathi ezinokuthula ukuze uqale usuku.
Ngemva kokuqwala izinyawo okuya e-Laurel Falls, khulula imisipha ekhathele emanzini afudumele, anamagwebu kubhavu oshisayo wangaphandle. Lapho ukushisa kwehlobo laseNingizimu kufudumala usuku, zipholisa echibini lomphakathi. Gcoba imisebe ethile ngenkathi uzungeza ichibi futhi ulalele umsindo wezimpophoma ezinokuthula ngemuva.
I-Mountain Valley WineryNjengenkampani yewayini enkulu kunazo zonke esifundazweni sase-Tennessee, izihambeli ziqinisekile ukuthi zithola iwayini elizohambisana nokuthanda kwazo phakathi kokukhethwa kwazo okuwine imiklomelo. Thatha uhambo lwamahhala nokunambitha ngenkathi wena nezinye izihambeli nifunda konke mayelana “izwe lewayini” yaseNingizimu etholakala ePigeon Forge.
I-Gatlinburg Golf CourseIndawo ye-Great Smoky Mountains ithatha izivakashi ngokuphindaphindiwe’ phefumula ngesibhakabhaka esibanzi esihlangana namamayela entaba, imifula ezolile ekhasa emahlathini aluhlaza, kanye nezigodi eziluhlaza. Yisiteji esihle kakhulu sezinye izinkundla zegalofu ezinhle kakhulu zezwe. Izinkundla ezinhle ze-Gatlinburg Golf Course’s 18-hole courses ziqinisekile ukuthi zizojabulisa wonke amaleveli abathandi begalofu.
I-Gatlinburg Sportsman’Club enezinhlobo ezi-5 ezihlukene zamabanga okudubula, imbobo yokudoba yangasese, kanye nenkundla ebheke emanzini, abazingeli nabashisekeli bangaphandle ngokufanayo baqinisekile ukuthi bayakuthanda ukuvakasha kwabo! Le nhlangano isingatha izinhlelo zokuphepha kwezibhamu futhi izibophezele ekukhuliseni nasekugcineni izinhlanzi emifudlaneni yendawo. Amalungu angewona amakilabhu avunyelwe ukuhlela ukuvakasha nehhovisi kuyilapho izihambeli ezingamalungu zithola 24/7!
Akuvamile ukuthi uhlangane nezilwane zasendle, njengamabhere ngenkathi uhlezi ezindlini ezihlala eziNtabeni Zomusi.
I-Pittman Center Laundry
Ibungazwe ngu-Cabins For YOU